Toro-làlana ho an'ny mpikaroka EC-Council: Fiverenana iray - Sekoly Tech
Fanamarinana EC: Ny tetikasa EC-Council Certified Handler dia tokony hanolotra sy hanitatra ny fahaiza-manao hiatrehana sy hikolokoloana ny fisian'ny fiarovana amin'ny PC amin'ny sehatra fananganana. Ny fianarana dia mamolavola fitsipika sy rafitra samihafa mba hahafantarana sy hamaliana ireo loza amin'ny fiarovana amin'izao fotoana izao sy mety.
Ny fikambanana miara-miasa dia mampihatra ny ambaratonga samihafa - famakiana rakitra, VoIP, encryption portable, Wi-Fi encryption, mail encryption, record encryption - server / desktop, framework join encryption, web server encryption, among others. Mitandrina mandrakariva ny fampiasana fiarovan-tena maromaro mba hahafahana miantoka ny antsipiriany rehetra mifandray ary manodidina ny fiarovana.
Ny tranga farany indrindra momba ny fiarovana amin'ny filaminana no nahatonga azy ireo ho toy ny fomba toy izany - izy rehetra dia samy tsy nisy na tsy nisy na inona na inona nanasokajiana. Nitarika ny fahaverezan'ny dolara maromaro miaraka amin'ny fitokisana ny mpanjifa. Ampio amin'ny lazany mahatsiravina fa manimba ny fo ny fo. Indray andro any - SONY PS3, RSA, iPhone, LinkedIn.
Ny certification ECES dia mahafantatra ny mpifaninana miaraka amin'ny teknika kryptografie manify, ohatra, Feistel Networks, DES, ary AES, ankoatra ny hafa.
Ny fianankaviana dia hianatra ny fiarovana ny filazam-baovao fototra raha ampiharina amin'ny cryptography
Ny fanadinana dia ho zatra amin'ireo teknika mahatsikaiky toy ny MD5, MD6, SHA, Gost, RIPMD 256 ary hafa
Teknolojia kryptografia, ohatra, RSA, Elgamal, Cuript Elliptic, ary DSA
Ny 10 Microsoft Training Cours dia hanova ny fomba fisainanao